Tsy mitombina ny maha vaomiera mahaleontena misahana ny fifidianana ny CENI, hoy ny depiote, Hanitra Razafimanantsoa, raha mijery ilay lalàna mifehy ny fifidianana nolaniana teo satria ny governemanta daholo no hita ho manendry ny ataony rehetra. Tokony ny CENI anefa no hanome soson-kevitra dia mamoaka didim-panjakana fotsiny ny governemanta.
Ho avy hanotrona ireo depiote miisa 13 eto Antananarivo izay manohitra ny fandaniana io lalàm-pifidianana io koa izahay avy any amin’ny faritra, hoy ny depiote, Tody Arnaud, ary hiara-dia amin’ny vahoaka na inon-kidona na inon-kihatra. Ho avy izahay 73 mianadahy, hoy izy.
Nangataka tany mirefy 100m2 teny Alarobia aho mba hiasan’ny fikambananay izahay, hoy ny depiote Naivo Raholdinina, saingy tsy hita hatramin’ny dosie. Ny vahiny anefa omena tany mirefy 3000 ha mandritry ny 30 taona.